Nke a bụ Microsoft ọhụụ na mkpịsị aka mkpịsị aka | Akụkọ akụrụngwa
Nke a bụ Microsoft ọhụrụ keyboard na mkpisiaka mmetụta
Ọtụtụ ndị na-achọ idozi maka keyboard ma ọ bụ ọnụ ala oge ọ bụla ha kwalitere PC ha. Mgbe ha zụrụ laptọọpụ kama PC, mmetụta na ngwaọrụ a nwere ike ịnye ha abụghịkarị otu ihe kacha mkpa mgbe ị na-ekpebi ịzụta. Agbanyeghị, ndị ọrụ na-etinye ọtụtụ awa n'ihu kọmputa, ma ọ bụ desktọọpụ ma ọ bụ laptọọpụ, keyboard bụ akụkụ bụ isi mgbe ọ na-abịa ikpebi otu ma ọ bụ ụdị ọzọ. Microsoft maara na ọ dịbeghị anya ọ malitere ọhụrụ keyboard nke na-enyekwa anyị nchebe ọzọ, akara mkpịsị aka na igodo Windows.
Igodo ọhụụ a na-enye anyị igodo ụfọdụ nwere njem dị mkpirikpi, dị ka kiiboodu anyị nwere ike ịchọta ugbu a na keyboard nhọrọ nke a na-ere na Surface Pro na nke dị ọnụ ahịa na 99 euro. Agbanyeghị, keyboard ọhụrụ a na-enye anyị mmetụ dị mfe, emere ya nke aluminom, na mgbakwunye na ịnye nchebe gbakwunyere nke bụ na mgbakwunye na ihe anyị nwere ike ịchọta ugbu a na ngwaọrụ ejiri Windows 10 na nke a na-akpọ Windows Hello. Igodo ọhụụ a abụghị naanị PC, mana anyị nwekwara ike iji ya na Mac ma ọ bụ ngwaọrụ ọ bụla ọzọ maka njikọ ya abụọ: Bluetooth ma ọ bụ site na njikọ USB.
Igodo nke oge a, dịka Microsoft mere ya baptizim, nwere oke ma ọ bụrụ na anyị ejiri ya na Bluetooth nke 15 mita, ọ bụ ezie na n'ọfịs ebe enwere ọtụtụ ngwaọrụ nke ụdị a, onye nrụpụta na-emesi anyị obi ike na 7 mita na-enweghị nsogbu. Ọnụ ego nke keyboard ọhụrụ a bụ $ 129, ọnụahịa dị oke elu ma ọ bụrụ na anyị ejiri ya na keyboard ndị ọzọ zụta ya, mana ọ dị ọnụ ala karịa kiiboodu Ime Anwansi nke Apple na-enye anyị, kiiboodu a na-akwụ ụgwọ na euro 149, mana n'adịghị ka nke a, Ọ bụ naanị dakọtara na ngwaọrụ Apple, n'agbanyeghị na iji mgbanwe ndị ọzọ, anyị nwere ike iburu ya na PC ma ọ bụ ngwaọrụ ọzọ nke ejighi macOS jikwaa.
Batrị ahụ, akụkụ bụ isi nke ụdị ngwaọrụ ikuku, nwere ike ịdịru ọnwa abụọ na-agaghị akwụghachi ya n'oge ọ bụla. O doro anya na a haziri keyboard a ma chee maka ndị ahụ niile na-eji ọtụtụ awa n'ihu kọmputa na ebe keyboard bụ akụkụ bụ isi nke ụbọchị anyị taa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Nke a bụ Microsoft ọhụrụ keyboard na mkpisiaka mmetụta
Amazon sonyere azụmaahịa ọdịnala site na ịzụrụ nri niile
Nke a bụ Logitech pad na mpe mpe akwa na-ebu oke ma ị na-eji ya